Fanofanana Marketing | Martech Zone
Analytics, marketing amin'ny atiny, marketing amin'ny mailaka, marketing amin'ny motera fikarohana, marketing amin'ny haino aman-jery sosialy, ary fiofanana teknolojia amin'ny Martech Zone
Zoma 12 Novambra 2021 Zoma 12 Novambra 2021 Douglas Karr
Nandritra ny taona maro dia nampihatra sy nampiditra sehatra media sosialy am-polony ho an'ny mpanjifa aho. Mbola manana fifandraisana tsara amin'ny maro aho ary mbola mahita ahy mampiroborobo sehatra vaovao sy efa misy ianao. Mety hampisavoritaka ny mpamaky izany… manontany tena hoe nahoana aho no tsy manoro sy manosika sehatra iray ho an'ny rehetra fotsiny. Tsy manao izany aho satria tsy mitovy ny filan'ny orinasa tsirairay. Betsaka ny sehatra media sosialy afaka manampy ny orinasa… fa ny anao
Alarobia, Novambra 10, 2021 Alarobia, Novambra 10, 2021 Douglas Karr
Niverina ny Salesforce Dreamforce ary hanao fihaonambe iray andro avy any New York City. Ny hetsika virtoaly miaraka amin'ny mpanjifa Salesforce, Salesforce Partners, ary Salesforce dia ahitana: Fampisehoana manainga fanahy avy amin'ireo mpanavao ankehitriny. Amin'ny maha-hetsika virtoaly azy, afaka misoratra anarana sy miditra na aiza na aiza misy fifandraisana ny tsirairay. Hisy mpandahateny vaovao, zava-nisongadina manokana ary tsy ampoizina
Alatsinainy, 28 Jona, 2021 Alatsinainy, 28 Jona, 2021 Douglas Karr
Nanohy niasa tamin'ny torolàlana fanatsarana izahay ho an'ny mpanjifanay. Na dia manadihady sy manome ny mpanjifanay izay tsy mety sy ny antony tsy mety aza izahay, dia ilaina ihany koa ny manome torolàlana momba ny fanitsiana ireo olana. Rehefa manadihady ny mpanjifanay izahay dia gaga foana izahay amin'ny ezaka kely ezaka natao hanatsarana ny fisian'izy ireo Youtube sy ny fampahalalana mifandraika amin'ireo horonan-tsary nampiakarin'izy ireo. Ny ankamaroany dia mampakatra ny horonan-tsary fotsiny, mametraka ny lohateny,
Alakamisy 18 martsa 2021 Alarobia, Oktobra 13, 2021 Douglas Karr
Fantatrao ve fa misy ny siansa biolojika ao ambadiky ny fomba ifanarahan'ny loko roa na mihoatra? Tsy mpitsabo maso na optometrist aho fa hiezaka handika ny siansa eto ho an'ny olona tsotra toa ahy. Andao atomboka amin'ny loko amin'ny ankapobeny. Ny loko ve dia matetika? Paoma mena… marina? Eny, tsia. Ny fahita matetika maneho ny jiro sy miverimberina tsy ho etona ambonin'ny paoma dia mahatonga azy ho hita, ovain'ny